sinoa-reducers - reducers, reducers worm, boaty boatin-kankana, boaty planeta, reducers hafainganana, variatera, kojakoja helikaly, giram-bidy sprial, boaty fambolena, giratra traktera, giratra kamiao, boaty kankana
Ny reducer hafainganana dia mazàna tsotra. Fiaran-dalamby tsotra fotsiny eo anelanelan'ny motera sy ny masinina izay matetika ampiasaina amin'ny fampihenana ny hafainganam-pandeha ampitana ny herinaratra. Ny reducer hafainganana, fantatra amin'ny anarana hoe reducer gear, dia fitaovana mekanika ...
Mampifandray rohy tranokala - Press Fit (BS / DIN / ANSI) Ny rohy mampifandray mahazatra ho an'ny rojom-bolo azo zahana ANSI, ampiasaina amin'ny rojo vy misy ny hafainganam-pandeha lehibe na toe-javatra sarotra. Nomena tsimatra roa mampifandray rivet ...
Precision Roller Chain, Elemen ary Connecting BacklinksNy rojom-pandrefesana vy vita amin'ny vy dia tena mahomby sy mahomby amin'ny fampitana herinaratra mekanika, izay, mandritra ny fifehezana ny fampiharana indostrialy, dia tena nanolo tanteraka ...
Precision Roller Chain, Elemen ary Connecting LinksNy rojo vy vita amin'ny vy mahomby dia matetika fomba tena mahomby sy mahomby amin'ny fampitana herinaratra mekanika, izay, mandritra ny sehatry ny fampiharana indostrialy, dia nanolo tanteraka ireo karazana hafa rehetra ...
STAINLESS STEEL CHAINNy fanamafisana ny Viking Chains Group ho an'nyConnexus Industries dia namela ny fitohizan'ny VC Brand of Steel Chains. Ny VC Brand dia milaza fa ny dingan'ny famokarana tena tsara, ary ny serivisy lava isan'andro. Ity marika mahomby ity dia ahitana ...
STAINLESS STEEL CHAINNy fanamafisana ny Viking Chains Group ao amin'nyConnexus Industries dia namela ny fitohizan'ny VC Brand of Steel Chains anao. Ny VC Brand dia milaza fa ny fizotry ny famokarana kalitao ary ny fisian'ny serivisy lava. Ity marika mahomby ity dia misy ny ...